विकासका लागि युवा दस्ता बनाउँदै शाह — Motivate News
विकासका लागि युवा दस्ता बनाउँदै शाह
Posted on February 16, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – एकजना ईन्जीनीयर जसले हरबखत देशको विकासबारे सोचीरहन्छ । आफ्नो दिमाग विभिन्न योजना र तीनको रुपरेखा बनाउन खर्चिन्छ । अनि ति योजनाहरुलाई कार्यान्वन गराउन पहल गर्छ । हरेक प्रकारका योजना बनाएर सरकारसमक्ष पेश गर्छ । तर एउटा ईन्जीनीयरको प्रस्ताव ठूलाबडाहरुले अगाडि बढाउन त्यतिधेरै चासो नदेखाउँदा कतिपय योजनाहरु रुपरेखामै सिमित हुन्छन् । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारलाई न त यस्ताखालका राष्ट्रवादीहरुको कुरा सुन्न फुर्सद छ, न त राम्रा योजनाहरु ल्याएर देशको विकास निर्माणमा ध्यान छ । देशको विकासका लागि सानोदेखि ठूलोसम्म तलदेखि माथिसम्म सवैलाई समेटेर काम गर्ने हो भने देशले थोरै समयमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम बग्ने गरि विश्व प्रशिद्ध स्वयज केनल जस्तै एउटा Chure Hil top Cannel नामबाट एउटा नेभिगेसन गर्ने खालको नदि बनाउदै, सिंचाई देखि विद्युत उत्पादनमा सहयोग गरोस् अनी देश विकासमा फट्को मार्नेर्छ भन्दा सायद तपाई हामी हाँसोमा उडाउछौँ होला । कसरी सम्भवव छ, नेपालमा यत्रो ठूलो योजना बनाउन ? कहाँबाट आँउछ पैसा ? जस्ता कुराहरु हाम्रो मनमा खेल्न सक्छन् तर एक जना ईन्जीनीयरले नेपालको कुल बजेट बरावरको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेका छन् ।
उनी पेशाले ईन्जीनीयरमात्र हैनन् सच्चा राजनीतिक खेलाडी पनि हुन् । यति ठूलो लगानीमात्र हैन, निर्माण पश्चात आम नेपालीलाई दिने फाइदा त्यति नै छ यो योजनामा । यस्ताखालको महत्वकांक्षी योजना पेश गर्ने व्यक्ति हुन् नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा उनीसंगै चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले चीनमा यस्तोखालको विकास देखे ।
राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेश भ्रमण गर्न गएको बेलामा राष्ट्रको लागि केहि कुरा सिकेर आउनु पर्छ । उनले त्यहाँको विकासका बारेमा बुझे । नेपालमा पनि यस्ताखालका योजनाहरु बनाएर काम गर्ने हो भने देशमा अरु केही गर्नुपर्छ जस्तो उनलाई लागेन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा कृत्रिम नदी बनाउने । त्यो नदीको दुवै किनारामा सुविधा सम्पन्न बाटो बनाउने । करि पाँचहजार किलोमिटरको परिकल्पना गरिएको उत्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्दासम्म नेपालको एक वर्षको वार्षिक बजेट बराबर खर्च हुने आंकडा निकालिएको छ ।
सो योजना सम्पन्न हुन करिव १० बर्ष लाग्ने छ भने त्यतिकै मात्रामा २० लाख युवाहरुले रोजगार पाउनेछन । यसरी नेपालको MEN र BRAIN विदेश DRAIN हुनबाट बच्नेछ तथा आफ्नो मातृभुमीको विकास आफै नेपालीले गर्नसक्ने क्षमता विकासका साथै देशको आर्थीक अवस्था उकास्ने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा ‘इस्ट वयस्ट मेगा वाटर म्यानेजमेन्ट पोर्जेक्ट’ नाम दिएको उक्त आयोजना हेर्ने वित्तिकै धेरै जना तर्सिए । ६ खर्व बजेट लाग्ने उक्त आयोजना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो । उनले यो योजना निर्माण सम्पन्न गर्न आर्थिक व्यवस्था गर्ने खालका तरिकाहरु बारे पनि योजना आयोगलाई जानकारी दिइसकेका छन् । उनले प्रतिपरिवार एक लाखका दरले विदेशमा रहेका ४० लाख युवाहरुलाई सेयर वितरण्न गर्ने तथा नेपालमा रहेका ४० लाखहरुलाई सेयर दिएर जम्मा आठ खरब रकम जम्मा गरि योजना सम्पन्न पार्ने परिकल्पना गरेका छन । यो त उनले सरकारलाई दिएको सामान्य सुझाव हो । उनी यो भन्दा ठूलठूला योजनाहरुको परिकल्पना गरिरहेका छन् ।
१९ वर्ष सडक विभागको पुल निर्माण तहमा काम गरेका साह एक कर्मशील ईन्जीनीयर थिए । तराईमा जन्मेर हुर्केका भए पनि हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई उक्तिकै माया गर्ने उनी १९ वर्ष काम गरेको सरकारी जागिर छोडेर हिँडे । उनी अन्याय अत्याचारमा न आफू परेको सहन्थे न त अरु कसैलाई अन्याय भएको हेर्न सक्थे । नेपालका ठूलठूला पुलहरुको निर्माणमा योगदान दिएका उनले केही काँग्रेसी कार्यकर्ताका कारण जागिर छोड्न बाध्य भए ।
उनी भन्छन् ‘नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का मन्त्री भएको समयमा उनका कार्यकर्ताले पैसा मागे । तर मैले दिन सकिन, मसँग उनीहरुले मागेको जति पैसा थिएन । चन्दा नदिएको भन्दै सरुवा गरिदिने धम्दी दिए । अन्ततः मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । म कताकता ठुलठुला पुल तथा राजमार्गमा काम गर्ने मान्छेलाई कुलोमा ल्याएर काम गर्न लगायो । ठूलो काम गर्ने ठाँउबाट नकारात्मक दृष्टिले मलाई हेरियो र त्यो मैले सहन सकिन र जागीर छाडेर खुला राजनीतिमा होमिए ।’
लोकसेवा आयोग लडेर सरकारी सेवामा नाम निकालेका साहले १९ वर्ष जागिर गरे । त्यो १९ वर्षमा उनले धेरै प्रकारका विभेदको सामना गर्नुपर्यो । उनले जागिरबाट राजिनामा दिनु पनि एउटा विभेदकै कारण थियो । उनले चन्दा नदिएपछि खुमबहादुरका कार्यकर्ताले सरुवा गरेर ओलाङचिङगोला सरुवा गरिदिने धम्की दिए । सोहि धम्की अनुसार उनलाई ओलाङचिङगोला हैन स्थानीय विमास मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । उनी पुलको काम गर्ने मान्छे, कुलोमा फालिदिएपछि जागिर खाएर बस्न उचित नहुने सोच र जागीरलाई तिलान्जली दिएर होमिए राजनीति गर्नतिर ।
२०५० मा जागिर छोडेका उनले २०५१ सालको महानिर्वाचनको चुनावमा उनी युनाइटेट पिपुल्स पार्टी मार्फत भाग लिए । खासै प्रगति भने भएन । सामाजिक न्यायको लडाई लड्ने उनी जनताको प्रत्यक्ष पीरमर्का बुझ्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । समानुपातिक, समावेशी, हिमाल पहाड तराईका आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएका वर्गको नेतृत्व गर्दै २०५२ सालमा मनमहन अधीकारीले सांसदको चुनाव घोषण गरेका बखत नेपाली जनता दलको जन्म भयो ।
सुरुवाती दिनहरुमा नेपाली जनता दलले उठाएका मुद्धाहरुको सिको गर्दै युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीले २०५५ मा बर्गीय सिद्धान्त त्यागेर, जातियताको मुद्धा उठाउदै हिंसात्मक रुपमा अगाडी बढ्यो । अहिले उनका मुद्धाहरु प्रायः स्थापित भएका छन् । देशमा नयाँ संंविधान आएको छ । अव केहि हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर बसेका छन् । उनी जनताको आशा अवको केहि समयमै पुरा हुने र सोचेजस्तो देशमा विकासले गति लिने बताउँछन् ।
सानैदेखि नेतृत्व क्षमता
उनी कक्षा आठमा अध्ययन गर्दाको कुरा हो । त्यतिबेला तराईमा सानो जातले छोएको खाना चल्दैनथ्यो, पूजा सामाग्रीहरु छोइए भने पुजा गर्नलायक हुँदैनथ्यो । सुद्र÷दलित संगसंगै, सुडि, तेली, कानु, कल्वार, बनीयाँ, रौनियार लागायतका जातिले छोएपछि केहि पनि चल्दैनथ्यो । अहिलेपनि नेपालको पहाड र तराईका धेरैजसो ठाँउमा अहिले पनि छ यो समस्या । उनले पूजामा लैजाँदै गरेको प्रसाद छोइयो भनेर उलाइ नै पुजा गर्न दिइएन । त्यतिबेलादेखि समाजमा जरा गाडेर रहेको विकृतिलाई चिर्न साथीहरुलाई एकजुट गर्नथाले । सामाजिक विभेदका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले ।
सानैदेखि कसैले हेपेर बोलेको नसहने उनी बुवाको कारणले राजनीति गर्न प्रेरित भइरहे । गाँउका धनीमानी, पञ्च, भलाद्मीहरुले गरिबहरुलाई राम्रोसँग खान दिँदैनथे । साहुसँग लिएको ऋण एकवर्षमै दोब्बर तिर्न पनि समस्याको अन्त्य गरेर उनका बुवाले गाँउलेको स्यावासी खाएकाले उनले पनि जनताको सेवा गनुपर्छ भन्ने सोच राखे र पञ्चहरुका विरुद्धमा लागे । शोषक सामान्तीका विरुद्धमा सानैदेखि धावा बोल्ने उनी स्कुलमा पनि लीडरकै रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । उनी स्कुलमा सानो हुँदा स्कुल भन्दा बाहिरै विद्यार्थी साथीहरुलाई गोलबन्द गराएर चौरमै पढाउँथे ।
१ हजार ५१ जनालाई संगठित
विकास निर्माण तथा राम्रो नेतृत्व चयनको लागि उनले एक हजार ५१ जना युवालाई संगठित गर्दैछन् । देशमा नेतृत्वको खडेरी परेको समयमा उनले देशको लागि केहि गर्नसक्ने राम्रा खालको नेतृत्वको खोजी गर्न युवाहरुलाई भेला गर्न लागेका हुन् ।
बेरोजगारीले आक्रान्त युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि पनि संगठित गर्न परेको उनको भनाई छ । देशको विकास गर्ने जिम्मा युवाको काँधमा आएको भन्दै समयमा राम्रो नेतृत्व आउन सके भावी पीँढीले हामीले पाएको जस्तो दुख नपाउने उनको भनाई छ । पहिलो चरणमा एक हजार ५१ लाई तालिम दिने र त्यो युवा दस्ताबाट पार्टीलाई बलियो वनाउने उनको भनाई ।
एक हजार ५१ बाट छानेर एउटा केन्द्रीय समितिको निर्माण गर्ने त्यो समितिलाई देशव्यापी परिचालन गर्ने उनको भनाइ छ । दुःखी, गरिव, असहाय, अशक्तलगायतको नेतृत्व गर्नको लागि र संविधानमा पाएको अधिकारको सदुपयोग गर्न नयाँ युवा जस्ताको आवश्यकता परेकाले नयाँ सोचका साथ देशको नेतृत्व गर्न चाहने युवाहरुलाई सहभागीतको लागि अनुरोध गर्दछन् ।
भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुभाव
यहि फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली भारतको भर्मण गर्दैछन् । सो भ्रमणका विषयमा शाहले केहि सल्लाह दिएका छन् । उनले हामी हाम्रो आन्तरिक विवाद, समस्या आफै मिलाउछौं र यसबाट भारतकलाई असर पर्न दिने छैनौं भन्ने कुरामा भारतलाई आस्वस्त पार्नु पर्ने बताए । नेपाल र नेपालीलाई असर गर्ने कुनै अभिब्यक्ति वा क्रियाकलाप लगर्नु उनको सुझाव छ ।
धेरै नै चर्चा गरिने गरिएको सन् १९५० को सन्धी सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्दे समस्या को समाधान गर्ने आस्वासन दिएका थिए, सो विषयमा देशको हकहितका लागी सोचेर कुरा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धिको २०० औं बर्षगांठ यहि मार्च ४ मा मनाइदैछ ।
सोहि पेरिफेरीमा हुनलागेको भारत भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर सो सम्बन्धमा पनि कुरा उठ्न सक्छ, सो सम्बन्धमा आफ्नो देशको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिदै व्यवहारिक र यथार्थपरक ढंगले आफ्ना भनाइ राख्न सचेत गराएका छन ।
Posted in हाम्रा सांसद् | Tagged harischaran shah, हरिस्चरण शाह | Leaveareply
हाम्रा सांसद् सम्बन्धीत
काठमाडौँ – सन्दर्भ थियो काल माक्र्सको जन्म द्धिशतवार्षिकी कार्यक्रमको । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीले बैशाख २१ गते शनिबार पशुपति भिजन गौशालामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सानो हलमा खचाखच भिडले बढाइरहेको गर्मिमा अबस्था भने असहज नै थियो । कार्यक्रममा केही त्यस्ता दृश्यहरु देखियो की...
काठमाडौं – प्रतिनिधी सभामा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएसंगै नयाँ सरकार नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले गर्ने करिब निश्चित छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको वाम गठबन्धन निमार्ण गरेर चुनावमा गएपछि प्राप्त स्पष्ट बहुमतको नतिजाले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सजिलो भएको...
काठमाडौँ – सम्यूक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधि सभाका उमेद्वार एमाले नेता रामविर मानन्धरले वाम सरकारले मात्रै देशको सम्बृद्धि र विकास गर्नसक्ने बताएका छन् । कम्यूनिष्ट एकता आजको ऐतिहाँसिक आवस्यकता रहेको भन्दै उनले निर्वाचन पछि बहुमतको वाम सरकार...
काठमाडौ – नेपाली काँगे्रसको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेश सभा ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उमेद्वार रहेका छन् साधुरमा खड्का । आफूलाई भष्ट्राचार विरोधी र विकास प्रेमी नेताका रुपमा चिनाउन चाँहने खड्काको प्रतिशपर्धा यसपटक एमालेका उमेद्वार कुसुम कार्कीसंग हुँदैछ...